Wednesday September 25, 2019 - 11:02:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa bilaabay xilka-xayuubin rasmi ah oo la xidhiidha madaxweynaha Donald Trump, taas oo ah inuu ka codsaday Ukraine taageero siyaasadeed, sida ay qoreen warbaahinta Mareykanka.
Go'aankan ayaa ka yimi madaxda sare ee Dimuqraaddiga Nancy Pelosi ayaa ay ku sheegtay: "waa in madaxweynuhu la kulmaa islaxisaabtan dhab ah".
Mr Trump ayaa iska fogaayey tallaabadaa doqonnimada ah, isagoona dedaalladaa ugu yeedhay kuwo 'qashin ah'.
Ma jiro madaxweyne Mareykan ah oo waligiis xilka looga xayuubiyay xil ka qaadis.
Toddobaadkii la soo dhaafay warbixinno ayaa sheegaya in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay ka dhalleeceeyeen xukuumadda xidhiidh Mr Trump uu la leeyahay hoggaamiye shisheeye, kaas oo markii dambe la soo faafiyey inuu yahay madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky.
kooxaha musuq baadhaa eedayntooda, - taas oo loo arkayey "arrin muhiim ah" isla mar ahaantaana lagu kalsoonaan karo ayna ka timi kormeeraha guud ee sirdoonka - ayaa ay dalbadeen xisbiga Dimoqraadiga ee Kongareeska, laakiin Aqalka Cad iyo waaxda cadaalada ayaa diidey inay bixiyaan.
Intii lagu jiray shirarka shirarka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ka dhacay New York Talaadadii, Mr Trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in qoraalee loogu baaqayo Mr Zelensky sii dayn doono Arbacada.
Mr Trump wuxuu qiray in kala hadlayey Joe Biden, oo ah horjoogaha xisbiga dimoqraadiga si uu ula kulma sannadka 2020, Mr Zelensky.
Laakiin Mr Trump wuxuu ku adkaystay inuusan u diideyn kaalmada uu u fidinayo Ukraine iyadoo rajadu tahay in waddanku uu ku furi doono baadhitaan la xidhiidha kuxigeenkiisii hore iyo wiilkiisa Hunter Biden, isagoo ku adkaynaya inuu kaliya doonayo Yurub inay sii xoojiso taageerada Bariga Yurub.
Mr Trump wuxuu sheegtay caddeyn la'aan in madaxweyne ku xigeenkii hore uu faragalin ku sameeyay in dacwad oogayaal reer Yukreeniyaan ahaa, si loo baadho wiilka Mr Biden, oo ah imika guddiga agaasimayaasha shirkadda tamarta ee Ukraine.
Ms Pelosi ayaa sheegtay in Mr Trump uu ku kacay "ku tagrifal sharci", waxayna ku tilmaamtay ficilladiisa "inuu ku guuldarraystay waajibaadkiisii dastuuriga ahaa".
"Toddobaadkan madaxweynaha wuxuu qirtay inuu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu qaado ficil u anfacaya siyaasad ahaan," ayay tidhi, iyadoo raacisay: "Waa in madaxweynaha lala xisaabtamo.".
Mr Biden wuxuu dafiray qaladkiisa wuxuuna sidoo kale taageeray dacwadaha la xidhiidha xilka-qaadistaasi, illaa iyo madaxweynaha Mareykanka uu u hogaansamayo baadhis lagu sameeyo.
Xilka-qaadidda Mr Trump "waxay noqon doontaa musiibo", ayuu yidhi Mr Biden. "Laakiin waa musiibodhacday isaga dartiis." Ninkan ayaa ah, safka hore xerta kula tartami doona doorashada 2020.